လေကြောင်းမန်ယူ FU24 950 စီးရီး DOWNLOAD - Rikoooo
လေကြောင်းမန်ယူ FU24 950 စီးရီး
Size ကို 52 ကို MB
ဒေါင်းလုပ် FSX & ရေနွေးငွေ့ Edition ကို & FS2004 #Native FSX နှင့် / သို့မဟုတ် P3D #3D ရဲ့ Virtual cockpit များအတွက်
FSX နှင့် FS2004 များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ။ installer ကိုမှရွေးချယ်ပါ။
တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအလုပ်၏အကောင်းဆုံး add-on တစ်ခုအလွန်ကောင်းသော, ရလဒ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်လေယာဉ်ပျံများကဲ့သို့ခံစားရ။
အဆိုပါမန်ယူအထူးသနယူးဇီလန်အတွက်စိုက်ပျိုးရေးပက်ဖြန်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခံရဖို့ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်တင်ခဲ့ (ထိုလှပသောပြင်သစ်ကျေးလက်အတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ချီတုံချတုံပါဘူး!) ။ ဒီလေယာဉ်ကိုအလွန်နိမ့်အမြင့်မှာပျံသန်းနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? သငျသညျ, ရှိသမျှခတ်ဖြေကြားမီက 40 မိုင်မှပျံသန်းနိုင်သည်လို့ပါပဲ။ သငျသညျစိတ်ကူးတစ်ခုပေးစေခြင်းငှါ, ဒီလယ်ပြင်၌အထူးကုခြင်း, Piper J3-ပြို, 35 မိုင်အကြောင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ add-on လက်တွေ့ကျကျအထွာနှင့်အရည်နှင့်အတူအပြည့်အဝကာတွန်းနှင့်အလွန်အမင်းအသေးစိတ်တစ်ဦးကို virtual cockpit, ပါဝင်သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်၏မော်ဒယ်လ်နှင့်၎င်း၏ animations တွေကိုဖွင့်စုံလင်သောများမှာ! အဆိုပါစားဆင်ယင်, အတောအတွင်းသုံးမျိုးကွဲအတွက်လာပါတယ်။ ဒီလေယာဉ်ပျံ၏မြတ်သောတိမ်းပျံသန်းမှု Simulator X တို့မှာအောက်ရှိဧရိယာကိုရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်စုံလင်သောအဖော်စေမည်
FS2004: သာလျှင်အနည်းငယ် features တွေကိုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသမ္မာသတိရှိကြလော့မှာတကယ်သမ္မာသတိရှိကြလော့ပါပဲ။ အဆိုပါရေဒီယို-ဆက်သွယ်ရေး (COMM1) လက်ဝဲဘက်ခြမ်းလေယာဉ်မှူးကထိုင်ခုံပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမီးလုံးပေါ်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်လိုက်ပါ။ GPS စနစ်ကံမကောင်းပျက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, လေယာဉ်နယူးဇီလန်အတွက်ရှေ့ပြေးလမ်းနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဖတ်နိုင်အောင်နိမ့်ပျံသန်း! သို့မဟုတ်သူသည်ကောင်းစွာဒေသတွင်းသိတယ်။ သငျသညျလိုပဲငါဆိုပါစို့?
အနိမ့်ပျံသန်းသင်ယူရာနှင့်ကြီးစွာသောပျော်မွေ့ရက Download လုပ်!
အကွံဉာဏျ၏ Little ကစကားလုံး: ကဆင်းသက်ဂီယာပြုစုပျိုးထောင်ဖို့မလိုအပ်တဲ့ပါ!
a nice ပျံသန်းရှိသည်!
လေကြောင်းမန်ယူ FU24 950 စီးရီး ဒေါင်းလုပ်
Bombardier ကမ္တာ့ Express ကို XRS FSX
Bombardier CRJ-200 အပြည့်အဝ Pack ကို FSX & P3D 1.0